ထူးဆန်းထွေလာ - Blogs - Myanmar in Singapore
All Blog Posts Tagged 'ထူးဆန်းထွေလာ' (38)
ခြေလက်မပါ စံပြလူသား Nick Vujicic ဆိုသူသည် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် သြစတေးလျနိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် မွေးဖွားစဉ်ကပင် (ခြေထောက်သေးသေးလေး… Continue
Added by Myint Myat Ko on March 18, 2012 at 1:20pm —
No Comments ၂၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ပဲရှိတော့တဲ့အသက်၂၀အရွယ်ပိန်ချင်သူကလေး
သူမ နာမည်က Ksenia Bubenko လို့ေါ်ပါတယ် အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် ဒီအမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်အလေး ချိန်လျော့ပြီပိန်ပိန်ပါးပါးလေးဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် ။ ပေါင်ချိန်များစွာ ကျအောင် ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းး သူမက ပိန်ချင်သထက်ပိန်တာကို စွဲလန်းလာခဲ့တယ် ။ အခု သူမ ၂၀ ကီလိုဂရမ်ပဲရှိပါသတဲ့ ။… Continue
Added by KaeKae0 on March 15, 2012 at 5:53pm —
No Comments ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသေးငယ်ဆုံးမျောက်များ
အကယ်၍ သင်ဟာ အမွှေးထူတဲ့ သတ္တ၀ါငယ်လေးတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Dark Roasted Blend နဲ့ ခဏတာတွေ့ဆုံကြည့်ပါ ။ သူဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာလူသိနည်းသေးတဲ့ နို့တိုက်သတ္တ၀ါ ပရိုင်းမိတ်တွေကို စုစည်းနေသူ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Aww လို့ခေါ်တဲ့ စာရင်းထဲမှာမှာ ဒီသေးငယ်တဲ့ လက်ချောင်းစာမျှသာရှိတဲ့ Pygmy marmoset… Continue
Added by KaeKae0 on March 15, 2012 at 5:41pm —
No Comments ၀က်ပေါက်လေးတွေကို သားသမီးလို့ထင်မှတ်ရှာသူကျားမကြီး
မိခင်ကျားမကြီးဟာ မမွေးဖွားရသေးခင်မှာပဲ ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းမရင့်သေးပဲ သူ့ကလေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် ။ စိတ်ဓါတ်တွေ တအားထိုးကျသွားပြီး မိခင်ကျားမကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာခဲ့တယ် ။ တိရိစ္ဆာန်ဆေး ကုဆရာဝန်တွေက ကျားမကြီးမှာ စိတ်ကျရောဂါ စွဲကပ်နေပြီလို့ အတည်ပြုခဲ့ကြတယ် ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ… Continue
Added by KaeKae0 on March 15, 2012 at 5:31pm —
No Comments ဒီလို အမေမျိုးလည်း ရှိတယ်
အလွန်တရာဆိုးဝါးလှတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီး Hannah က ဒီအဖြူရောင်ကျားလေး နှစ်ကောင် ကိုသူတို့အမေနဲ့ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ် ။ Anjana ဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုရောက်ရှိလာပါတယ် ။ Anjana ဆိုတာကတော့ တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ ကျားမျိုးဆက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကို ရောက် ရှိလာတဲ့ မျောက်ဝံမကြီးတစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ အံ့သြဖွယ်ရာမိခင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အလုပ်တော်တော်များများကို လည်းကူလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ နို့ဗူးတိုက်ကျွေးခြင်းလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။… Continue
Added by KaeKae0 on March 15, 2012 at 5:24pm —
No Comments ငါးခူ တစ်ကောင်ထဲနဲ့ တဆွေလုံး ၊ တမျိုးလုံး စားကြမယ်
ငါးခူ တစ်ကောင်ထဲနဲ့ ဆွေမျိုးတစ်စုလုံး ဘယ်လိုလုပ်စားရ ပါ့ မလဲနော် ...
ပုံလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင် ....
ထိုင်းနိုင်ငံ Mekong မြစ်ထဲမှ ဖမ်းမိတာပါ ။
Added by daelumon on July 17, 2011 at 8:28am —
Added by mg thi la on June 4, 2011 at 11:27am —
ထိုမိသားစုများမှာ ဘခ်တောင်ကျေးရွာမှ အခန်း ၁၀၀ ပါ လေးထပ်တိုက်ကြီးတွင် နေထိုင်ကြသည်။ သူ့ဇနီးများက မစ္စတာ ချန်နာနဲ့…
Added by Lynn Htet Sandar on February 24, 2011 at 7:52am —
ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့ရသော မြင်ကွင်းများ
တရုတ်ပြည်မှ နောက်ဆုံးဖွင့် လှစ်လိုက်သည့် တစ်ကိုယ်ရေအိပ်စက်နိုင်မည့် တည်းခိုခန်း...…
Added by Joli on January 21, 2011 at 3:40pm —
10 Wackiest And Idiotic Motorcycles Ever (ဆိုင်ကယ်လ်ချစ်သူများအတွက်)
Added by ကိုကိုပေါသွပ် on October 27, 2010 at 7:41pm —
Safety First! (Construction field တွင် အလုပ်လုပ်နေသူများ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါသည်)
Can you believe that some people in this way play with their lives? They really look like they have never heard the word “safety”. No fear of heights, electric shock, and many other things, they are getting into
the adventure, for which others think it isafake. No, this is not
fake, this is the madness!…
Added by ကိုကိုပေါသွပ် on October 27, 2010 at 7:12pm —
1) The Knight…
Added by ယမမင်းလေး on October 5, 2010 at 10:14pm —
1) The Colgao…
Added by ယမမင်းလေး on October 3, 2010 at 11:25pm —
!!! အရှိန်ထိမ်း ကိရိယာ !!!
လမ်းတွေ ပေါ်မှာ အရှိပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းတတ်တဲ့ ကားတွေကို အရှိန်ထိမ်းဖို့ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံအသီးသီးဟာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့်ကတော့ ကင်မရာများတပ်ဆင်ပြီး ကားအရှိန် ကိုတွက်ချက်တတ်ကြပါတယ်။ပြီးရင် ဒဏ်ရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီစနစ်ဟာ ကုန်ကျစရိတ်များသလို အလုပ်လဲရှုပ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ကနေဒါ နိုင်ငံကတော့ အောက်ပါ အရှိန်ထိမ်း ကိရိဟာ ကိုသုံးပါတယ်။
ဒါဟာ ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်ပြီး… Continue
Added by အိမ်လွမ်းသူ on September 28, 2010 at 6:47pm —
!!! က မ္ဘာတဝှမ်းရှိကို့ယို့ကားယားနိုင်သောရေချိုးနည်းများ !!!
အဲဒီရေချိုးနည်းတွေထဲက အချို့ဟာ တကယ့်ကိုပဲ… Continue
Added by အိမ်လွမ်းသူ on September 28, 2010 at 5:04pm —
စာသင်နှစ်အစမှာ တပည့် လေးတွေရဲ့ အမည်နဲ့ မျက်နှာကို မှတ်မိအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ အတန်းထဲ မှာ ကျောင်းသားသစ်တွေလက်ခံရတဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာ/ ဆရာမအတွက်တော့ တစ်ကယ့်ကိုခေါင်းကိုက်စ
ဒီထက်ပိုပြီး လေးမွှာပူးကျောင်းသူအသစ်လေးယောက်ကိုထိန်းရမယ်ဆိုယင်တော့စဉ်စားသာကြည့် ပါ
အယ်လီ၊ ဂျော်ဂျီနာ၊ ဂျက်ဆီကာ နဲ့ဟိုလီကားလ်စ် တို့ ဟာ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ လေးမွှာပူး ညီအစ်မတွေ
ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ ဟာ ယခုမှ… Continue
Added by Lynn Htet Sandar on September 19, 2010 at 8:22pm —
ဖြေးဖြေးချင်းဟပါ Snappy ရာ...
Gently does it: Tueanjhai Pimsan manages to get her crocodile friend… Continue
Added by Lynn Htet Sandar on September 19, 2010 at 8:15pm —
အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးမှသည် ကြောင်တောင်တောင်အနိုင်ဆုံးအထိ စံချိန်တင်မှတ်တမ်းများပါပဲ... ၃၃.၅ လက်မသာမြင့် သည့် ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးနို့ စားနွားမ မှသည် အအေးစုတ်ပိုက်တံပေါင်း ၄၀၀ ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း ပါးစပ်ထဲတွင် ၁၀ စက္ကန့် ကြာထည့် သွားထားနိုင်သူ အထိ အမျိူးစုံစံချိန်တင်နိုင်မှုများ ပါဝင်… Continue
Added by Lynn Htet Sandar on September 19, 2010 at 8:00pm —
အာရပ်လူမျိုးများရဲ့ စုပေါင်း မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ
သူငယ်ချင်းတို့ ရေဒါကတော့ အာရပ်လူမျိုးတွေ စုပေါင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအခမ်းအနားတခုပါ။
သတို့ သမီးတွေ အားလုံးကဆင်တူတွေဝတ်ဆင်ထားတော့ ဘယ်သူက ကိုယ့်သတို့သမီးလဲ ဆိုတာရွေးတတ်ပါ့မလားမသိဘူး … Continue
Added by KaeKae0 on September 4, 2010 at 10:00am —
တရုတ်နိုင်ငံမှ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာ ထမင်းချက်အသစ်တစ်ယောက်ငှားရမ်းဖို… Continue
Added by Lynn Htet Sandar on September 1, 2010 at 4:30pm —
ငါးခူ တစ်ကောင်ထဲနဲ့ တဆွေလုံး ၊ တမျိုးလုံး စားကြမယ်
ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေတဲ့.. ၅၅ ပေ၇ှည်လျားသော..မြွှေကြီး...
လှည်းကူးမြို့က လူထူးလူဆန်း ကိုဝင်းကျော်
ရောဂါဆန်းကြောင့် ၉၆ နှစ်အရွယ်မျှ အိုမင်းနေသည့် ၁၂ နှစ်သမီး ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးဘဲ ပညာဆက်သင်နေ
2016September (3)July (3)June (2)May (1)April (3)March (2)February (7)January (10)2015December (4)November (4)October (10)September (1)August (2)July (25)June (24)May (14)April (25)March (116)February (219)January (251)2014December (254)November (190)October (1549)September (2788)August (18)July (37)June (26)May (35)April (20)March (31)February (30)January (30)2013December (39)November (45)October (39)September (33)August (22)July (104)June (38)May (61)April (36)March (106)February (139)January (111)2012December (160)November (74)October (54)September (65)August (38)July (89)June (299)May (475)April (289)March (168)February (194)January (104)2011December (116)November (114)October (95)September (79)August (83)July (71)June (108)May (72)April (120)March (86)February (120)January (117)2010December (92)November (140)October (231)September (227)August (243)July (106)June (122)May (42)April (46)March (115)February (106)January (96)2009December (31)November (59)October (127)September (81)August (41)July (39)June (36)May (24)April (23)March (2)February (3)January (1)2008November (8)October (3)September (2)1999November (89) Welcome toMyanmar in Singapore